Cashadii Ugu Caajiska Badnayd oo ay Wada Cuneen M/weynaha Xiligan iyo M/weynihii Hore ee Degaanka – Rasaasa News
Madaxweynihii hore ee degaanka Somalida Ethiopia Daa,uud Maxamed Cali, oo aan mudo dheer cag dhigin xarunta degaanka Somalida tan iyo intii laga qaaday jagada madaxweynenimo ayaa dib ugu laabtay Jijiga ciidan.
Daa,uud oo jagada madaxweynenimo ku waayey eedaymo badan oo uu galay, intii uu hayey talada degaanka Somalida Ethiopia ayeyna jirin wax dambi ah oo loo raacay, kolkii laga reebo jagada uu lumiyey. Daa,uud ma jiraan wax shaqo ah oo uu hayo, waxaana uu degan yahay Addis Ababa.
Degaanka Somalida Ethiopia waa degaanka ugu madaxweyne badalida badan degaanada dalka Ethiopia, kuligoodna waxay jaga madaxweynenimo ku lumiyaan hanti lunsasho iyo musuqmaasuq. Arintaas oo lagu macneeyo inta badan lagu macneeyo in Somalidu ayna ahayn maamul aqoon, oo ayna kala garanaynin in jagada ay u hayaan ummada, balse mooda in ay beeshooda u hayaan.
Xiliyadii hore kolka lagu helo madaxweynaha jagada lumiya musuq maasuq iyo hanti lunsi waa la xidhi jiray, baryahan dambase waa la joojiyey sababta oo ah waxay noqotay arin uu madaxweyne waliba ku sii talo galo in kolka uu jagada laga qaado uu xabsi galo iyo waliba eedayn dibadeed oo la saaro dawlada Ethiopia.
Dawladu waxay samaysaa tababar joogta ah [on job training] oo la siiyo dhamaan masuuliyiinta degaanka Somalida Ethiopia, si loo yareeyo hanti lunsiga, walow aan la odhan karin la dabar jaray musuq maasuqa.
Imaanshaha Daa,uud Maxamed ee magaalada jijiga, ayaa abuuray hadal hayn ah in uu nin idman yahay, mar labaadna shaqo ka qaban doono degaanka Somalida Ethiopia. Jagadaas oo sida la sheeg sheegayo noqon karta mid ka mid ah jagooyinka ugu muhiimsan degaanka Somalida Ethiopia.
Da,uud ayaa Jijiga loogu soo dhaweeyey si heer madaxweynenimo ah, waxayna casho wada cuneed madaxweyne Cabdi iyo madaxa xafiiska madaxtooyada. Waxaa isweydiin mudan in cashada dhaxdeeda ayna marna is daymoonin madaxweyne Cabdi iyo Da,uud waxayna u ekayd cashadu casho qosol la,aan ah.
Ururka Dhallinyarada Somalida Ethiopia ee San Diego, oo Hamblayo udiraya shacabka Somalida Ethiopia Ciidul Fidriga